ယောင်းမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄) ခု - For her Myanmar
ယောင်းမသိသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၄) ခု
အမယ်.. နံပါတ် (၂)က အဆန်းတော့…
ဒီနေ့ခေတ် လူငယ်တိုင်း အီးမေးလ် (အထူးသဖြင့် လူသုံးများတဲ့ Gmail) သုံးတတ်ကြပါတယ်နော်။ Gmail သုံးတဲ့ ယောင်းတွေကို Gmail မပြောပြဘဲထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာသိလားဟင်။ မသိသေးဘူးဆိုရင် အက်ဒ်မင်ပြောပြမှာပေါ့။ ကိုယ့်ယောင်းယောင်းတွေအတွက် ဒါမျိုးတွေလိုက်ရှာပြီး ပြန်ဖောက်သည်ချနေကျ အက်ဒမင် ပဲလေ။ ဟဲဟဲ… ကဲ စပြောပြီနော် ….
ဒါကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်တော့ ဟုတ်ပါဘူး။ တော်တော်များများသိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိသေးတဲ့ ယောင်းတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ Gmail ရဲ့ Setting ကိုသွား၊ Theme ကို နှိပ် လိုက်ရင် ပုံလန်းလန်းလေးတွေ ပေါ်လာမှာပေါ့။ အဲဒီထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံလေးကို နှိပ်ပြီးပြောင်းလိုက်ရုံပဲနော်။
Related Article >>> အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမယ့် ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် shortcut key များ
၂။ Gmail က Dot တွေကို မသိဘူး
Gmail Address တွေမှာ Dot လို့ခေါ်တဲ့ အစက်လေးတွေ ( . ) ထည့်ကြတယ်လေ။ တကယ်တမ်းတော့ Gmail က အဲဒီ အစက်လေးတွေကို မဖတ်နိုင်တာကြောင့် စာပို့တဲ့အခါ Address မှာ Dot တွေ မပါဘဲ ပို့လို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ယောင်းစာပို့မယ့် လိပ်စာက wutyee.123@gamil.com ဆိုပါတော့ ။ ယောင်းစာပို့တဲ့အခါ dot ကိုဖြုတ်ပြီး ဒီလို wutyee123@gmail.com ဆိုပြီး ပို့လိုက်တာနဲ့ ရောက်ပါတယ်။ မယုံရင် စမ်းကြည့်နော်။ အက်ဒ်မင်တော့ သေချာစမ်းသပ်ပြီးပြီ။
၃။ ပို့ပြီးသားစာတွေကို ပြန်ယူလို့ရတယ်
မြား ပြထားတဲ့နေရာလေးမှာ ပြောင်းလို့ရတယ်နော်
တစ်ခါတလေ ကိုယ်က စာရေးပြီး မေးလ်ပို့လိုက်တယ်။ send ဆိုတာကို နှိပ်ပြီးကာမှ ကိုယ်က စာကို ပြန်ပြင်ချင်တာ၊ မပို့ချင်တော့တာရှိတယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင် သူ့ဆီ မေးလ်မရောက်ခင် ဆက်မပို့ပဲ ထားလို့ရပါတယ်။
ဒီလို လုပ်ဖို့ဆိုရင် Setting ထဲက Undo Send: Send cancellation period ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ အချိန်ကို ကိုယ်လိုသလောက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ – ၃၀ စက္ကန့်ဆိုတာ နှိပ်ထားတယ် ဆိုပါစို့။
ဒါဆိုရင် ယောင်းစာပို့ပြီးတိုင်း အဲဒီစာကို မပို့ချင်တော့ရင် ဖျက်လို့ရအောင် Gmail က ၃၀ စက္ကန့် အချိန်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ပြောင်းသွားရင် Unsend ဆိုတာလေး နှိပ်လိုက်ရုံပဲနော်။
၄။ Gmail မှာ Shortcut တွေရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ သုံးတဲ့အခါ အသုံးပြုရ လွယ်ကူအောင်လို့ Shortcut တွေ ထည့်ထားသလိုပဲ Gmail ကို Shortcut တွေနဲ့ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဘာလုပ်ချင်ရင် ဘယ် Shortcut သုံးရမလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ အလွယ်လေးပါ။ Gmail ကို ဖွင့်ပြီးရင် “?” လေး ( Shift + / ) ကို နှိပ်လိုက် Gmail အတွက် လိုအပ်တဲ့ Shortcut တွေ ကျလာလိမ့်မယ်။ အပေါ်က ပုံလိုလေးပေါ့နော်.. အဲဒါလေးတွေကို မှတ်ထားပြီး သုံးလို့ရပါပြီ။
ဒါတွေကတော့ လူသိနည်းသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ အကြောင်းတွေပါ။ ဒါလေးတွေက အသုံးတည့်တာမို့ ယောင်းတို့နေ့စဉ်အလုပ်တွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။
အမယျ.. နံပါတျ (၂)က အဆနျးတော့…
ဒီနခေ့တျေ လူငယျတိုငျး အီးမေးလျ (အထူးသဖွငျ့ လူသုံးမြားတဲ့ Gmail) သုံးတတျကွပါတယျနျော။ Gmail သုံးတဲ့ ယောငျးတှကေို Gmail မပွောပွဘဲထားတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှရှေိတယျဆိုတာသိလားဟငျ။ မသိသေးဘူးဆိုရငျ အကျဒျမငျပွောပွမှာပေါ့။ ကိုယျ့ယောငျးယောငျးတှအေတှကျ ဒါမြိုးတှလေိုကျရှာပွီး ပွနျဖောကျသညျခနြကြေ အကျဒမငျ ပဲလေ။ ဟဲဟဲ… ကဲ စပွောပွီနျော ….
ဒါကတော့ လြှို့ဝှကျခကျြတော့ ဟုတျပါဘူး။ တျောတျောမြားမြားသိကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မသိသေးတဲ့ ယောငျးတှကေို ပွောပွပေးမယျနျော။ Gmail ရဲ့ Setting ကိုသှား၊ Theme ကို နှိပျ လိုကျရငျ ပုံလနျးလနျးလေးတှေ ပျေါလာမှာပေါ့။ အဲဒီထဲက ကိုယျကွိုကျတဲ့ ပုံလေးကို နှိပျပွီးပွောငျးလိုကျရုံပဲနျော။
Related Article >>> အလုပျလုပျတဲ့အခါ လှယျကူမွနျဆနျစမေယျ့ ကှနျပြူတာကီးဘုတျ shortcut key မြား
၂။ Gmail က Dot တှကေို မသိဘူး
Gmail Address တှမှော Dot လို့ချေါတဲ့ အစကျလေးတှေ ( . ) ထညျ့ကွတယျလေ။ တကယျတမျးတော့ Gmail က အဲဒီ အစကျလေးတှကေို မဖတျနိုငျတာကွောငျ့ စာပို့တဲ့အခါ Address မှာ Dot တှေ မပါဘဲ ပို့လို့ရပါတယျ။
ဥပမာ ယောငျးစာပို့မယျ့ လိပျစာက wutyee.123@gamil.com ဆိုပါတော့ ။ ယောငျးစာပို့တဲ့အခါ dot ကိုဖွုတျပွီး ဒီလို wutyee123@gmail.com ဆိုပွီး ပို့လိုကျတာနဲ့ ရောကျပါတယျ။ မယုံရငျ စမျးကွညျ့နျော။ အကျဒျမငျတော့ သခြောစမျးသပျပွီးပွီ။
၃။ ပို့ပွီးသားစာတှကေို ပွနျယူလို့ရတယျ
မွား ပွထားတဲ့နရောလေးမှာ ပွောငျးလို့ရတယျနျော
တဈခါတလေ ကိုယျက စာရေးပွီး မေးလျပို့လိုကျတယျ။ send ဆိုတာကို နှိပျပွီးကာမှ ကိုယျက စာကို ပွနျပွငျခငျြတာ၊ မပို့ခငျြတော့တာရှိတယျ ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရငျ သူ့ဆီ မေးလျမရောကျခငျ ဆကျမပို့ပဲ ထားလို့ရပါတယျ။
ဒီလို လုပျဖို့ဆိုရငျ Setting ထဲက Undo Send: Send cancellation period ဆိုတာကို နှိပျပါ။ အဲဒီမှာ အခြိနျကို ကိုယျလိုသလောကျပွောငျးလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ – ၃၀ စက်ကနျ့ဆိုတာ နှိပျထားတယျ ဆိုပါစို့။
ဒါဆိုရငျ ယောငျးစာပို့ပွီးတိုငျး အဲဒီစာကို မပို့ခငျြတော့ရငျ ဖကျြလို့ရအောငျ Gmail က ၃၀ စက်ကနျ့ အခြိနျပေးပါတယျ။ ကိုယျက စိတျပွောငျးသှားရငျ Unsend ဆိုတာလေး နှိပျလိုကျရုံပဲနျော။
၄။ Gmail မှာ Shortcut တှရှေိပါတယျ။
ကှနျပြူတာ သုံးတဲ့အခါ အသုံးပွုရ လှယျကူအောငျလို့ Shortcut တှေ ထညျ့ထားသလိုပဲ Gmail ကို Shortcut တှနေဲ့ သုံးလို့ ရပါတယျ။ ဘာလုပျခငျြရငျ ဘယျ Shortcut သုံးရမလဲဆိုတာ သိခငျြရငျတော့ အလှယျလေးပါ။ Gmail ကို ဖှငျ့ပွီးရငျ “?” လေး ( Shift + / ) ကို နှိပျလိုကျ Gmail အတှကျ လိုအပျတဲ့ Shortcut တှေ ကလြာလိမျ့မယျ။ အပျေါက ပုံလိုလေးပေါ့နျော.. အဲဒါလေးတှကေို မှတျထားပွီး သုံးလို့ရပါပွီ။
ဒါတှကေတော့ လူသိနညျးသေးတဲ့ Gmail ရဲ့ အကွောငျးတှပေါ။ ဒါလေးတှကေ အသုံးတညျ့တာမို့ ယောငျးတို့နစေ့ဉျအလုပျတှအေတှကျ အဆငျပွစေမှောပါ။
Tags: Features, Gmail, Internet & Email, Knowledges, technology, tips